जग्गा किन्नु अघि विचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु – गुड न्यूज 24 – GoodNews24
Home/गुड न्यूज 24/जग्गा किन्नु अघि विचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु – गुड न्यूज 24
जग्गा किन्दा प्राय ठगिने सम्भावना बढि हुन्छ यस्ता धेरै घटनाहरु प्राय सुन्नमा आइरहन्छन । यस्तो घटना तपाई संग पनि नघटोस भन्नको लागि तपाइले केहि कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छा । घर जग्गा किन्दा ज्यादै साधारण कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ जुन ज्यादै महत्वपुर्ण छन् । प्रश्नहरु सोध्दै जादा जग्गवाल वा दलाल कतै अक्मकियो वा एउटा कुरा झुठो बोल्यो भने । त्यहाँ गडबड छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ । कारोवारीसंग भेट्ना साथ यि प्रश्नहरु सोध्नुहोस ।
– १ जग्गा कसको नाममा छ ?
– २ उसको परिवारमा श्रीमान, श्रीमति ( संख्या सहित ) , छोरा छोरी – उमेर सहित, कति जना छन् ? यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । किनकी जग्गा किन्दा प्रत्येक हकवालाको सहमति चाहिन्छ ।
– ३ खरीद प्रकृया शुरु हुँदा कागज लेख्दा र पास गर्दाको दिन सरोकार वाला सबै जम्मा हुन सक्छन् कि सक्दैनन् । एउटामात्र पनि अनुपस्थित भए लफडा पर्न सक्छ ।
– ४ पुरानो वस्तीमा किन्दा चारकिल्लाका सधियाँरबाट सल्लाह लिनु अति राम्रो हुन्छ ।
यदि माथिका प्रश्नको जवाफ आएमा मात्र जग्गा हेर्ने वा नहेर्ने, मुल्य घटवढ गराउने काम शुरु गर्नु पर्दछ । जग्गामा के हेर्ने ?
क) जग्गाको सक्कली लालपुर्जा र नक्शा ।
ख) लालपुर्जा अनुसारको क्षेत्रफल र नक्शा अनुसारको आकार मिलेको छ छैन हेर्नु पर्दछ ।
ग) नक्शामा बाटो छ, छैन यदि छ भने कति फिट छ ?
घ) नक्शा अनुसार फिल्डमा बाटो छ कि छैन ?
यो ४ वटा कुरा मिलेपछि पनि कागज गरीहाल्ने होइन, त्यो लालपुर्जा लिएर सिधै मालपोत कार्यालयमा जाने र कम्प्युटर शाखामा गएर यो लालपुर्जा अनुसारको जग्गा यहि मालिकको नाममा छ छैन ? सोध्ने त्यहाँवाट , सवैकुरा मिले पछि मात्र , जग्गा किन्ने प्रकृया शुरु गर्नुपर्दछ ।
लालपुर्जा लगेर सम्बन्धित मालपोतमा देखाई सकेपछि यदि जग्गा कसैको नाममा वा कुनै बैंक सहकारीबाट रोक्का राखिएको छ छैन थाहा लाग्दछ । बैँक वा सहकारीको रोक्का छ भनेर पहिला भनिएको छ भने त्यो ठूलो समस्याको विषय रहेन यदि पहिला भनिएको छैन भने त्यसले फेरी शंका निकाल्दछ । रोक्का भएको किन्नै नहुने भन्ने हुँदैन तर जग्गाको मुल्य भन्दा त्यहाँ फुकुवा गर्न लाग्ने मुल्य बढी भएमा त्यसले पनि समस्या ल्याउँदछ । कति ऋण वा कुन शर्तमा रोक्का रहेको हो त्यो बुझ्नु पर्दछ । मुद्दा परेर रोक्का भएको हो भने, वादी प्रतिवादी दुवै तिरबाट बुझेर किन्न मिल्ने ठहरे किन्नु पर्दछ । अन्यथा बैना दिइ हाल्नु हुँदैन । रातीमा र पानीआएको बेलामा जग्गा हेर्न जानु हुँदैन रातिको समयमा जग्गा हेर्न जाँदा धेरै कुराहरु मेसो नपाउन सकिन्छ । त्यसैले हाइटेन्सन लाईन त्यसका पोल आउँदै गरेको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि पानी आएको बेलामा र रातिमा जग्गा हेरेर ढुक्क हुनु हुँदैन ।
बाटोको सम्वन्धमा घडेरीलाई जग्गा किन्दै हो भने बाटो प्रमुख मुद्दा बन्न सक्छ । सामान्यतया अहिले काठमाण्डौ उपत्यकामा २० फिटबाटो नभई घर बनाउन पाईदैन । भुकम्प अघि १० फिट १८ फिटमा पनि बनाउन पाइन्थ्यो । यसको अर्थ जति सानो बाटोमा जग्गा किनिन्छ , त्यति धेरै आफ्नो लाल पुर्जाको जग्गाछोड्नु पर्दछ । सानो बाटोमा सस्तो र ठूलो बाटोमा महंगो पर्नुको मुख्य कारण पनि यहि हो । फिल्डमा बाटो छ नक्शामा छैन ज्यादै नै विश्वासिलो ठाउँमा वाहेक नक्शामा बाटो छैन भने जग्गा किन्न हुँदैन । फिल्डमा बाटो विभिन्न कारणले बनाइएको हुन सक्छ तर त्यो नक्शामा छैन भने त्यो जतिबेला पनि बन्द हुन सक्छ । नक्शा बीना अधिकार खोज्ने कानूनी आधार नै रहदैन ।
घट्दै कोरोना सङ्क्रमण ः बढ्दै निको हुने दर-Goodnews24
Pingback: मानव शरीरमा हुने ३६ अनौठा तथ्यहरु जो विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ – GoodNews 24 – GoodNews24